Jen. Muxyadiin Tani waa Déjà vu Dabkana Laguma Ciyaaro [DHEGAYSO] | SAHAN ONLINE
Jen. Muxyadiin Tani waa Déjà vu Dabkana Laguma Ciyaaro [DHEGAYSO]
Waxaa markii u horeysey waraysi bixiyey tan iyo markii xilka laga qaadey Gen. Muxyadiin Axmed Muuse oo ah taliyaa hoggaaminaya ciidan uu ku sheegey in ay gadoodsan yihiin oo ay ka maqan tahay xuquuqdoodi.
Gen. Muxyadin ayaa dhibaatada taagan ku tilmaamey keliya in ay ka dhalatay kadib markii ciidanku ay waayeen xuquuqdoodi.
Wuxuu qirtey in isaga iyo ciidankuba soo baneeyeen furinta Galgala, waxaa taas noo sii dheer ayuu yiri Tukaraq ayaan tagney iyadana waan ka soo baxney kadib markii aan weyney wax xuquuq ah.
Waxaa hubal ah in Puntland ciidamo xoogleh ka joogaan Buuraha Calmadow ee Galgala ku taalo iyo Gobolka Sool, laakiin Gen. Muxyadiin ma fariin ayuu u dirayaa Argagixisada Buuraha Calmadow joogta ee shalay dilkiisa doonaayey iyo Ciidanka Somaliland marka uu lee yahay furintu waa banaantahay, waa qodob Maxkamad lagu soo taagi karo Gen. Muxyadiin.
Jeneraalku wuxuu qirey in shan bilood ay ka badan tahay gadodkoodu, wuxuu hoosta ka xariiqey waxa uu samaynaayo in ay ka hor imaanayaan sharciga iyo amniga oo uu ahaa mid awal u taagan in uu ilaaliyo.
Si aad u fahanto faalladan waxaa muhim ah in aad dhegaysato waraysiga BBC
Gen. Muxyadiin wuxuu ku dooday in gurigiisi loo dhacay biilkii ay ka bililiqeysteen ciidan Madaxweynuhu u direy, xaaskiisi la jirdiley!, jawaabaha arrimahan waxay u yaalaan ciidanka Puntland iyo cidda ay ka amar qaataan, inkasta oo aan dhaqan ahaan ciidanka Puntland lagu aqoon kuwo sida uu sheegayo Jeneraalku u dhaqma ooxaasaska iyo gabdhaha u gudba, oo waxyeelo gaarsiiya, haddiise uu been ka sheegayo waxay mujin kartaa shakhsiyadda Muxyadiin qofka uu yahay.
Kala saaridda Ciidanka Puntland
Gen. Muxyadin ayaa ciidanka Puntland u kala saarey kuwo mushahar la siiyo iyo kuwo aan la siin,kuwa uu wato waxa uu ku daray kuwa aan waxba la siin, halka ciidanka Punland isaga dul dhigtey in ay ka hortagaan falal amniga ka baxsan in ay sameeyaan uu ku tilmaamey kuwo xuquuqdooda hela oo Madaxweynuhu si gaar ah wax u siiyo,inkasta oo hadalkiisi hore ku sheegay ciidanka Puntland oo dhan ayaan wax xuquuq ah helinoo wada gadoodsan!, ma sheegin sabab Puntland ay ku kala takoorto ciidankeeda, sidoo kale ma sheegin ciidankii ilaalinayey xarumaha UN-ka sababta ay uga mid noqdeen kuwa furimaha soo baneeyey ee Qarxis tegey, kuwaas oo weliba raasaas xoogan ku furay xarumihii ay ilaalinayeen, si Qaramada Midoobey Garoowe uga cararto?
Gen. Muxyadiin markii uu furinta Galgala kala soo baxayey xoogaaga ciidanka ah, waxaa xilkii laga qaadey Agaasimii ciidanka sirdoonka Cabdi-yare oo ay xigto hoose yihin, hoos ka dhegayso Ninkaas oo xilkii si magac ahaana u wareeiyey hubkii Dowladdana la harey waraysiga uu siiyey VOA.
Qofkasta oo soo marey ciidan ama wax ka garanaya waxa uu ogyahay sharciyadda ciidanka u yaala, Madaxweynaha Puntland waa taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida u dhigayo dastuurku, ciidanku waa ka duwan yahay shaqaalaha rayidka ah, waxaana uu lee yahay shuruuc adag oo ay u horeyso in uu Taliyahooda u hoogaansamo dacar haddey ka kharaar tahay, haddii kale cidan ha isku soo gelin ee banaanka ka joog.
Gadoodku waa mid aan shuruucda ciidanka meel ka soo gelin cid allaale iyo ciddii ku kacdana la horgeyn karo Maxkamadda ciidanka.
Doodda Gen.Muxyadiin iyo xaqiiqdeeda!
Haddaba aan u soo noqono doodda General Muxyadiin Axmed Muuse, ma tahay mid run ah in ciidanku gadoodsan yahay? su’aalahan ayaa u bahan in Jeneralka la weydiiyo, markaas ayaa jawaabta saxda ah la helayaa.
Ciidanka wuxuu ku sheegay dhawr boqol oo askeri.
Ciidan intaas tiro le’eg oo Punland jooga waxa ay u baahan yahiin raashin joogto ah, shidaal, daawo,rasaas iyo sahay kale iyo weliba sida aan ognahay in maalinkasta loo geeyo maandooriyaha qaadka!, oo askeri kastaa maalinkasta ku qayilo 15USD, haddaba ciidan intaas oo xuquuq ah helaya ma yahay mid gadoodsan?
Waa mid aan qarsooneyn in maamulka Puntland ee hadda uu ku guuldaraystey bixinta mushaharaadka si joogto ah, laakiin haddii la is-barardhigo muddada ay ku jiraan hawlgalka QARXIS, dhaqaalaha ku baxaya waxa uu laba jibbaar ka badan yahay xuquuqda uu sheegayo in ay ciidanka ka maqan tahay, waana ciidan hawlgalaya oo dib ugu soo noqdey maamulkii la doortey in uu ka hor yimaado.
Ciidamada Puntland horey waa u gadoodi jireen xeryaha ayey ka soo bixi jireen jidadka ayey kala xiri-jireen, saacado ayeyna ahaan jirtey in ay muujiyaan waxay tabanayaan.
Haddaba miyaan Gen. Muxyadiin iyo cidamada u wato lagu sifeyn karin Jamhad buuxda, meel kastaba taakulo haka heshee? Miyaanu dagaal u diyaar garoobin? oo la og-yahay dhaqaalaha dagaal u baahan yahay.
Marka le’eego dhaqanka Gen. Muxyadiin waxa uu u egyahay kii Hoggaamiye kooxeedyadii Muqdisho maahan mid gadood ah oo noociisa horey loo arki jirey ee waa mid lagu daciifinayo maamulka Puntland, lagu qaybinayo ciidanka Puntland, meelna uga dhacaysa Midnimada iyo wadajirka Puntland.
Gen. Muxyadiin wuxuu sheegay in ciidanka Pntland oo dhan ay gadoodsan yihiin!, is-weydiine xagee ayey joogaan ciidamada kale ee hubeysan oo gadoodsan.
Qodobka labaad ee la-yaabka leh ayaa ah:
Gen. Muxyadiin Axmed waxa uu qirey in mar hore xilka laga qaadey taasna ay caadi tahay, haddaba maxay tahay sifada iyo sharciyadda uu ku hoggaaminaayo ciidankan?, Ma isaga oo aan xil Puntland u ahayn ayuu hoggaamin ciidan uu sheegay in ay xuquuq ka maqan tahay, iyaduna waa denbi iyo arrin kale oo sharciga ka baxsan.
Dooda ah waanu gadoodney oo mushaharaad dhawr bilood ah dartood ayaan u kharsh garaynaynaa Jamhad buuxda waa baroortu orgiga ka weyn, durdurana geel baa ku jabey, ee caqligu ha shaqeeyo sharci iyo dastuur ayaa Puntland dhigatey isaga hala isku ixtiraamo, natiijo kasta oo ka dhalata xiisadda uu kiciyey Gen. Muxyadiin waa mid dummaddiisa noqon doonta cid kalena aysan la wadaagi doonin.
Inkasta oo qaab iyo sharciyad ahaanba ay kala duwan yihiin dhibaatadii horey Puntland u soo martey 2001 -2003 iyo waxa uu maanta Nugaal ka wado Gen. Muxyadiin waxaa la dihi karaa Jeneraale tani waa Déjà vu, Punland taariikh madow ayey ku tilmaantaa iyo waxaan loo noqon doonin, ee Jeneraalku ha ogaado in gacmihisu dab ku ciyaarayaan.
Ugu danbeyntii waxaa shacabka Puntland ka war-sugayaan 25 ergay ee waxgaradka gobolku iska xuleen in ay arrinta dhameeyaan iyo culimada is-xilqaantey, Puntland marba mar ayey ahayd, ciidanka Qarxis galey wax ay uga baahi weyn tahay ma jirto, shacabka Puntland oo malaayiin dollar si fudud ku ururshey waxba kuma ahan in ay garab istagaan ciidankooda xilliga adag ee lagu jiro.
Déjà vu = Horay loo arkey (already seen)
Xuquuqda Warbixinta Horseed Media